Ngeengozi zokuhlafuna i-marmalade
Ubuncwane obuninzi kubantwana abaninzi kunye nabantu abadala njengokufuna i-marmalade kubonakala kudala, kwindawo ethile phakathi kwekhulu leshumi elinesithoba e-Melika. Yakhawuleza ithatha abathengi, ngenxa yeempawu zayo ezintle, kunye nokulungeleka ukugcinwa, kuba ukufuna i-marmalade ayizange iyancibilike kwaye ayizange ifakwe kwizandla. Kodwa eRussia le mveliso yabonakala kamva kamva - kwi-90 yekhulu le-20, nangona eYurophu yayivele ifunde malunga nayo kwinkulungwane yeshumi leminyaka.
Ngokukhawuleza ukuba ukuveliswa kwe-chewing marmalade kuza kuzisa inzuzo enkulu, abavelisi baqala ngento yokuba baqala ukubonelela imikhosi yakhe, njengezidibaniso kwimigangatho yamajoni. Bawuthanda, kwaye ngokukhawuleza waba yintando phakathi kwabantu abemi. Kwiminyaka emininzi, iindidi ezahlukahlukeneyo zokuhlafuna i-chewing marmalade zadalwa, i-yorhwebo yasasazeka ngokukhawuleza, kuba akukho isizukulwana esinye saseMelika esithandileyo.
Ngoku ukuveliswa kwe-chewing marmalade kuphuhliswe kakuhle kwaye abavelisi baqinisekisa abathengi bokuba luncedo, kwaye kungekhona nje impawu ezintle. Kodwa ngaba kunjalo? Kungekudala, ngokuqhelekileyo baqala ukuthetha ngeengozi zokuhlafuna. Ngoko ke, kwindawo yokuqala, kuyimfuneko ukuqonda ukuba zeziphi izinto eziyingxenye yokuhlafuna i-chema marmalade.
Ngoko ke, phakathi kwezinto ezininzi ezenza i-chewing marmalade, eziphambili zinokucingwa njenge-agar-agar kunye ne-pectin (ngokuqhelekileyo isakhiwo). Ezi zinto ziguqula. Ukongezelela, ukubunjwa kubandakanya ishukela, amacu ahlukahlukeneyo kunye nama-flavour, amanye ama-preservative, i-molasses kunye nedayi.
Abavelisi bambiza isiqhamo se-candy esiluncedo, beqinisekisa ukuba i-calori ephantsi, kuba iqulethe kakhulu kunezinye iiskese (i-100 gram yomkhiqizo, malunga ne-321 kcal). Nangona kunjalo, ungayikhohlwa ukuba iqukethe iswekile okanye ama-substitutes athile, kwaye sele sele ibuza ukuba luncedo lokusebenzisa i-marmalade.
Abavelisi abafihli ukuba akukho nzuzo yezempilo kwiidyayi kunye neendapu, kodwa baqinisekisa ukuba ezi zinto zingenzi umonakalo. Ngokutsho kwabo, yonke into ebonwa "ifana neyendalo" kwiindawo zayo ezifana nezo zinto zendalo, kodwa ixabiso elincinci.
Makhe sizame ukufumana ukuba yintoni inzakalo engafanelekanga ngayo i-marmalade.
Njengoko sele kuthethwa, kwi-chewing marmalade endaweni ye-pectin yendalo ihlala idibene. Imveliso yayo ivela kwizigaba eziliqela kunzima kunye nokudibanisa kwamacidi ahlukeneyo kunye nezinye iikhemikhali. Ewe, akukho nto efana nokulinda i-pectin yemvelo, kodwa kufuneka kuphawulwe ukuba ngobuncinane ubuncinci be-pectin abayi kuyenza ingozi enkulu.
Ubuninzi beshukela, i-ngulu ye-gelatin kunye ne-pectin ye-artificial kwi-marmalade ayisoyikanga, kodwa ngaphandle kwayo yonke into ekhankanywe ngentla, ukubandakanywa kubandakanya iikhemikhali ezifana needayi, izilondolozo kunye nama-flavour. Ngokuqinisekileyo abazuzisi nayiphi na inzuzo. Ukuze kutyunjwe i-marmalade ayizange iyanyibiliki okanye i-linden ezandleni, yayibuqilima kwaye ibonakale, umxube okhethekileyo we-wax uyongezwa kuyo. I-90% ye-marmalade. Kwimimandla yendalo (iifuno zemifuno kunye ne-wax), iindawo zalo zineenzuzo ezininzi zempilo, kodwa iifuno zemifuno ziveliswa ngoku ngaphandle kokusetyenziswa kwezibonelelo ezinobungozi.
Kukwafanelekile ukuba kuqaphele ukuba abavelisi beempawu baqaphela iintlobo zee-marmalade, ezenziwa ngesiseko seziqhamo zendalo. Kodwa oku akuthethi ukuba banokudliwa ngokukhulu. Nangona i-marmalade enjalo yinto epholileyo, kufuneka ukwazi umlinganiselo.
I-Marmalade ithathwa njengobuncwane obunconyayo ngabaninzi bezondlo. Ngoko ke, ungazithethi ngokwakho ukusetyenziswa kwayo, kodwa kufuneka ukhethe ngokuchanekileyo. Emva kokufunda ngokucophelela ukubunjwa nokungafumani izongezo zokufakelwa apho, kunokwenzeka ukuba unike umfana onjalo kubantwana abaneminyaka emibili, kodwa emva kokutya kunye ncinane kakhulu.
I-marmalade esebenzayo, ngokungafani ne-chewing gum, inokubaluleka ngakumbi, kaninzi kunokuba izele izongezo zamakhemikhali, ngoko ke kulungele ukuba abantwana bayinike. Ubuncinane lukhuselekile.
Indlela yokwenza ikhonteli lephepha
I-Skewers yengulube ene-lemon
Uhlobo lomfanekiso "Apple"
Kutheni ndiphupha ngencwadi yephupha?
Ingxaki yokukhulelwa kunye nezindlela zokuzisombulula